Tag: social media iwu | Martech Zone
Tag: soshal midia iwu
Etikpụrụ nkwalite mmekọrịta ọha na eze… okwu ahụ na-eme ka m maa jijiji. Ọ dị ka ọ dị mgbe ọ bụla mmadụ na-anwa itinye usoro iwu n'ihe niile n'oge a ma enweghị m ike ịnagide ya. N'ezie enwere omume adịghị anakwere na ntanetị na n'ịntanetị offline mana ịma mma nke ikpo okwu bụ na ma ị na-agbaso iwu a na-akpọ, ị ga-ahụ nsonaazụ. Nke a bụ ihe atụ… M na-eso nnukwu ọrụ email na-eweta ọrụ na Twitter na ha ejirila DM'd ugboro abụọ
Enweghị m mmasị na okwu "iwu" mgbe ọ na-abịa Social Media Marketing, mana ekwenyere m na anyị nwere ahụmịhe zuru oke na ọmụmụ ihe iji ghọta ebe ụlọ ọrụ mere nnukwu ọrụ iji tinye usoro mgbasa ozi ma kpoo ya. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe di egwu n’itinye olile anya na ntuziaka mgbe obula n’inwe usoro mgbasa ozi gi. Dị ka ihe ọ bụla, enwere iwu edeghị ede na mgbasa ozi mgbasa ozi. Onye obula
Fraịdee, Nọvemba 16, 2012 Fraịdee, Nọvemba 16, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị gụọ blog a ruo oge ụfọdụ, ị maara na m na-eleda iwu anya. Mgbasa mgbasa ozi ka na-eto eto ka itinye iwu n'oge a ka dị ka akaghi aka. Ndị folks na FastCompany na-achịkọta ọtụtụ nchịkọta ndụmọdụ ma na-akpọ ha Iwu nke Social Media. Ihe omuma ihe omuma a bu nchikota nke iwu edeputara na akwukwo nke September. Agaghị m akpọ iwu ndị a dịka m siri mee
Dị ka ndị ahịa anyị niile maara nke ọma otu o siri sie ike ịgbanwe omume ndị mmadụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị sie ike ị ga-anwa ime. Ọ bụ ya mere Google, ka ọ dị ugbu a, ga-enwe ọ continuedụ na-aga n'ihu na nyocha ọ bụla, n'ihi na ndị mmadụ maara "Google ya" mgbe ha chọrọ ịchọta ihe na weebụ. N'ịmara nke a, enwere m mmasị na ọnụ ọgụgụ ndị m na-ahụ na Twitter na blọọgụ na-agwa ndị ọzọ